LinkedIn Inowedzera Kambani Peji Kushanda | Martech Zone
LinkedIn Inowedzera Kambani Peji Kushanda
Chipiri, Mbudzi 13, 2018 Chipiri, February 9, 2021 Douglas Karr
Nepo Facebook yakasiya zvikuru mapeji ehupenyu hwekusvika, zvinoita kunge LinkedIn iri kutora mukana wekubatsira mabhizinesi kutyaira kushamwaridzana pamwe nekuwedzeredzwa kwezvimwe zvitsva zvitsva mumapeji emakambani.
Nharaunda dzakakosha pakubudirira kwebhizinesi rega rega. Vashandi, vanobatirana navo, vatengi uye vanotsvaga basa vanosanganisira nharaunda, uye pamwe chete, vanogona kubatsira kutyaira kukura kwekambani yako kuburikidza nehurukuro dzakanaka. Sparsh Agarwal, Chigadzirwa Mutungamiriri, LinkedIn Mapeji
Nhasi, LinkedIn yakazivisa LinkedIn Mapeji - chinotevera chizvarwa che LinkedIn Kambani Mapeji. Mapeji akavakwazve kubva pasi kumusoro kuti zvive nyore kumakambani, masangano nemasangano, kubva kumabhizimusi madiki kuenda kumabhizinesi makuru, kusimudzira nhaurirano dzinovaka nenharaunda yeLinkedIn yenhengo dzinopfuura mamirioni mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe.
LinkedIn inogadzira anopfuura mamirioni maviri ezvinyorwa, mavhidhiyo, uye zvinyorwa mune zvekudya pazuva, uye kudyidzana uku kuri kungokura chete. Ruzivo rwavo rweMapeji matsva rwakavakirwa kukurudzira nharaunda dzinoshanda uye hurukuro paLinkedIn nevashandi vekambani, vatengi, uye vateveri.
Mapeji akagadzirirwa kubatsira masangano kunyatsobatana nenhengo, kukura bhizinesi ravo uye kuvaka kubatana kusingaperi. Kuti uwane chinangwa ichi, Mapeji akavakirwa pamusoro pembiru nhatu dzakakosha:
Joinha Kukurukurirana Kunokosha - Mamaneja enharaunda, anozivikanwawo semaAdmin, ndiwo musana wesangano rezvematongerwo enyika. Mapeji anovapa maturusi avanoda kusimudzira kudyidzana kwemazuva ese nenharaunda yavo. Admins ikozvino inogona kutumira zvigadziriso uye kupindura kumashoko, pairi kuenda kubva kuLinkedIn nharembozha app yeIOS uye Android. Admins vanogona zvakare kusanganisa peji ravo nema hashtag, saka vanogona kuteerera mukati uye kupindura nhaurirano dzinoitika nezve yavo marangi kana akakodzera misoro paLinkedIn. Uyezve, nepo maAdmin vagara vaine mukana wekutumira mifananidzo, vhidhiyo yemuno uye mameseji kune avo maLinkedIn Makambani Makambani, ivo vava kugona kugovana magwaro, senge mharidzo dzePowerPoint, Zvinyorwa zveIzwi uye maPDF kuti vataure zvakapfuma uye zvinomanikidza nyaya dzemhando.
Ziva uye Kukura Vateereri vako - Rimwe rematambudziko makuru ema admins kuziva kuti ndezvipi zvemukati zvinowedzera kukosha kwenzvimbo yavo, zvikasadaro zvinyorwa zvavo zvinogona kuwira pasi. Tavaka Zvaunogona Kuita, ficha nyowani inoburitsa iwo misoro uye zvemukati zvinoitika pamwe nevanovavarira vateereri paLinkedIn. Neiyi nzwisiso, maAdmin anogona kunyatso gadzira uye kugadzira zvemukati izvo vateereri vavo vane chokwadi chekuita nazvo Vashandirwi vanogona kutora tarenda ravo rekumaka padanho rinotevera neCareer Mapeji, izvo zvinokupa iwe sarudzo yekuita yazvino uye inogona tarenda neiyo Hupenyu tebhu uye Mabasa tebhu, iyo inopa yakatarwa kutarisa mukambani yako tsika, mabasa uye zvazvakaita kushanda kukambani yako.
Bata Vanhu vako - Vashandi vekambani ndivo pfuma yavo huru uye vanogona kuve vatsigiri vavo vakuru. Kusimudzira mazwi avo kunogona kubatsira masangano kuvaka hukama hwakasimba nevateereri vavo. Isu tinofara kuzivisa suite yezvishandiso kubatsira masangano kubatanidza vanhu vavo nekuunza kugona kuwana uye kugovana kwavo kwevashandi 'yeruzhinji LinkedIn zvinyorwa kubva kwavo Peji. Tiri kuburitsa kugona kupindura uye kugovana zvakare chero zvinyorwa paLinkedIn panotaurwa Peji rekambani, sekupupura kwevatengi uye ongororo yezvigadzirwa. Izvi zvinoita kuti makambani aratidze hurukuro idzo vanhu vari kuita nezvadzo, uye dzinogona kubatsira mhando yavo kumira pamusoro pevanhu.
Tsvaga Mapeji kubva kune Anofarira Maturu
LinkedIn yakavandudza avo vavanoshanda navo APIs kuti zviite nyore kuti maAdmin apinde mukutaurirana paLinkedIn kuburikidza neAPI. Semuenzaniso, kuburikidza nekubatanidzwa kwechigadzirwa neHootsuite, maAdmin vanogona ikozvino kugamuchira notices mukati meHootsuite kana paine chiitiko pane yavo LinkedIn Peji.
Iine vanopfuura mamirioni 590 mamirioni evashandisi, LinkedIn inzvimbo yepamberi yezvikwata zvekubatana nevatengi, vashandi uye tarisiro. Isu tinofara kuve wekutanga manejimendi manejimendi manejimendi manejimendi yekumisikidza LinkedIn's nyowani Notifications API kuitira kuti vatengi vedu vagone kunyatsotyaira kubatika paLinkedIn. Ryan Holmes, Hootsuite CEO & Muvambi
LinkedIn yakabatanawo ne Crunchbase kuisa maonero emari uye makiyi ekudyara paLinkedIn Mapeji, ichipa nhengo dzeLinkedIn nzwisiso yakazara yehuwandu hwebhizinesi rekambani.
Kuti udzidze zvakawanda nezve LinkedIn Mapeji uye maitiro ekuvaita kuti vashandire sangano rako, ndapota shanya pano. LinkedIn yatanga kuburitsa ruzivo rweMapeji matsva muUS uye ichaita kuti riwanikwe kumabhizinesi ese epasirese mumavhiki anotevera.
Tags: LinkedInlinkedin kambani mapejilinkedin profile yekambanilinkedin yemakambani mapejilinkedin mapeji
Maitiro Ekuwedzera Mushandisi kuGoogle Analytics
SocialPilot: Yemagariro Media Management Chishandiso cheTimu nemaAgency